News | Tag: Curry
४२ डिग्री तापक्रममा ट्रकमा खाँदिएका तरकारी नाकामा सड्यो
काठमाडौँ । तरकारी र फलफूलको नमुना सुनौलीबाट बोकेर काठमाडौं ल्याइन्छ, प्रयोगशालामा परीक्षण गरिन्छ र रिपोर्ट फेरि नाकामा पुर्‍याइन्छ । कम्तीमा तीन दिनसम्म तराईको ४२ डिग्री तापक्रममा ट्रकमा खाँदिएका तरकारी र फलफूलको हालत के हुन्छ ? नाकामा प्रयोगशाला खोइ ?
तरकारीमा बिचौलिया : कारबाही रोक्न अदालतमा
काठमाडौं । कालिमाटी तरकारी बजारमा सम्झौताविपरीत व्यापार गर्दै आएकाहरूमाथिको कारबाही प्रक्रिया लम्बिने भएको छ। द्विपक्षीय सम्झौताविपरीत तरकारी, फलफूल, माछा र खाद्यान्नको पसल सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारी र बिचौलियामाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै जिल्ला अदालतमा निवेदन परेको छ।